Somalia online: Magaalada Faluuja oo gacanta u gashay Ciraaq.
Faluuja-(SONNA)- Wakaalada Wararka Reuters, ayaa soo warisay , in Ciidamada Dowladda Ciraaq ay maanta si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalada Faluuja,kadib markii muddo Todobaad ah gudaha magaaladaasi ay kula dagaalmayeen maleeshiyada Daacish.
Gacan ku haynta Magaalada faluuja ayaa waxa ay labada Ciidan, ku dagaalmayeen muddo shan Todobaad ah, ugu dambeystiina ay Ciidamada Ciraaq gebi ahaamba magaaladaasi ka saareen kooxda xagjirka ah ee Daacish.
R/Wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Cabaadi, ayaa sheegay inay ka guulaysteen Daacish,iyadoo Generaal ka tirsan Ciidamada Ciraaq oo lagu magacaabo C/wahaab Al-Saacidi, uu isna Telefishinka Ciraaq u sheegay in dagalkii faluuja uu dhamaaday,ayna magaaladaasi ka sifeeyeen Daacish.
Wuxuuna Generaalku, intaa Raaciyay, in Daacish ay ka dileen 1800 ciidan,iyadoo wixii soo haraayna ay carareen, wuxuu cadeeyay in howlgalka Ciidan ay magaalada Faluuja ku qaabsadeen ay bilaabeen 23kii bishii May ee Sanadkan.
Dagaalka magaalada Faluuja ayaa sababay in ay ka cararaan 85kun qof oo ah,dadkii magaaladaasi deganaa .
Ciidamada Daacish ee looga itaal roonaaday gacan ku haynta magaalada Faluuja, ayaa waxa ay magaaladaasi qabsadeen bishii Janaayo sanadkii 2014kii, lix bilood kadib markii lagu dhawaaqay waxa ay ugu yeereen Dowladda khilaafada islaamka.